किन जुनकिरीको जीउमा बत्ती बल्ने गर्छ ? यस्तो छ रोचक कारण - Sidha News
वास्तवमा जुनकिरीको जीउमा बल्ने बत्ती हाम्रो घरमा हुने अन्य बत्तीहरु जस्तै नै हो । फरक यति मात्रै छ कि अरु बत्तीहरु बल्दा ताप उत्पन्न हुन्छ तर जुनकिरीको बत्ती भने तापबिना नै बल्ने गर्छ । यसरी उत्पन्न हुने विशेष खाले प्रकाशलाई ‘ल्यूमिनेसेन्स’ भनिन्छ । जुनकिरीमा यस्तो प्रकाश ‘लुसिफेरिन्’ नामक तत्त्वको कारणले उत्पन्न हुने गर्छ । यो तत्त्व अक्सिजनसँग मिलेर प्रकाश उत्पन्न गर्ने गर्छ ।
तर प्रकाश उत्पन्न गर्ने यो प्रक्रिया ‘ल्यूसिफेरेज्’ नामक अर्को तत्त्व नभएसम्म सम्भव हुँदैन । ल्यूसिफेरेजले यो रासायनिक प्रक्रिया पूरा गर्न मद्दत गर्छ तर आफू स्वयम् भने यो प्रक्रियामा संलग्न हुँदैन । जुनकिरीको शरीरमा यी दुबै तत्त्वहरु हुने गर्छन् । लुसिफेरेजले लुसिफेरिनलाई अक्सिजनसँग मिलेर बल्नमा मद्दत गर्छ ।
जुनकिरीले यस्तो प्रकाश किन उत्पन्न गर्छ त ? यो प्रश्न पनि तपाईंहरुको मनमा उठ्न सक्छ । यसको बारेमा वैज्ञानिकहरुले विभिन्न विचारहरु प्रस्तुत गरेका छन् । कसैले उनीहरु आफ्नो जोडी खोज्नका लागि यस्तो प्रकाश उत्पन्न गर्ने गर्छन् भनेका छन् । कसैले भने तिनीहरुले राती सिकार गर्ने चराहरुलाई तर्साउन त्यसो गर्ने गरेको कुरा अघि सारेका छन् ।
यसले तिनीहरु त्यस्ता चराहरुको आहारा हुनबाट बच्ने कुरा पनि बताएका छन् । अझ कसैले त यो केवल रसायनिक प्रक्रिया मात्र हो भन्ने विचार अघि सारेका छन् । यसको पछाडि कुनै पनि उद्देश्य छैन भन्ने उनीहरुको विचार रहेको छ । प्रकाश उत्पन्न भएर न त जुनकिरीलाई फाइदा गर्छं न त हानि नै गर्छ । यसले तिनीहरुको शारीरिक प्रक्रियामा कुनै ठूलो भूमिका नखेल्ने कुरा पनि अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् ।